Imibhangqwana eminingi niyawazi kakade: ubuhlobo okwanelisayo kudinga isikhathi esiningi namandla investment. Nakuba abanye bafunda kabuhlungu, abanye baqonda kusukela ekuqaleni ukuthi umuntu akakwazi abe nobuhlobo okwanelisayo ngaphandle kokuba ngokuthula engayilindele okokuqala. Uma ubuka ubuhlobo bakho futhi unomuzwa wokuthi ngeke ujabule kahle indlela manje, kufanele wazi ukuthi yesiqalo enhle ngcono kuba wena. Ukukhula Self nokuthuthukiswa komuntu siqu kuyizinzuzo izihluthulelo hhayi kuphela injabulo yakho siqu, kodwa futhi ukuba ukuphila kube mnandi futhi okwanelisayo njengoba umbhangqwana. Awukwazi uguqule wena noma ubuhlobo bakho uqhekeko yesibili, kodwa nazi ezinye amaphuzu ukucabangela:
1. Injabulo livela ngaphakathi
Lokho okushiwo, kufanele wazi ukuthi umgomo wakho eyinhloko ekuphileni akuyona ujabule ngesikhathi uhlala futhi wenze lutho ngakho. Kulindelwe injabulo umane singqongqoza kini kunalokho ubuwula. A ubuhlobo esanelisa kuhilela abantu ababili abahlonipha futhi obakhathalelayo nomunye. Umlingani ngamunye uthatha into kusukela ubuhlobo, kodwa futhi uletha into kuwo. Nakuba uthando kungaba blind and sinemibandela, ayinayo ukuba sizidele. Ngakho, ungalindeli omunye ujabule. Zisize; funda indlela ongajabula ukuze ezinomthelela enjabulweni couple yakho.
2. Susa ugongolo esweni lakho siqu
Isisho esidala sisifundisa ukuba siqale the ipulangwe esweni ethu, uma sifuna ukwazi ukubona ngokucacile futhi kamuva nje ukususa uyichashaza kusuka esweni yomunye. Kusho ukuthini lokhu? Bheka kuqala wena esibukweni, thola bese uzama ukusebenza on amaphutha akho ngaphambi khomba misshapes umlingani wakho. Ngaphandle falling in the beqisa futhi uya for self ukulahlwa, ukusika umlingani wakho ezinye komsila, ukuyeka ukuyibuka kwakhe / kwakhe konke okwenzayo single ngokusebenzisa khulu, futhi zama ukuqonda izenzo zabo esikhundleni ukwahlulela kubo. Ngokuzayo unayo ngisho kancane couple ingxabano, esikhundleni sokuzama ukubeka icala omunye, zibuze ukuthi yini onile. Zama ukuthola izindlela zokugwema izingxabano, futhi, lapho kuphakama ukungezwani enjalo, sicabange ngekhambi ukuyixazulula ngokuthula.
3. Gcina uzolile yakho
Ngakho ubudlelwano eziningi baphambuka kuphela ngoba abashadile nesimo sengqondo yeqhawe. A ubuhlobo esanelisa akuyona yempi. Awudingi ukuba bahlasele umlingani wakho noma ukubala ngokunqoba kwakho njengomuntu score ephakeme ngeke kukusize ujabule. Kunalokho, zama ukuqhubeka ngizolile yakho futhi ukuba nesineke nomlingani wakho. Cabanga ukuthi umlingani wakho akusilo isitha sakho, futhi noma nini lapho nifuna ukukhulisa izwi lakho, sengidonsa umoya futhi bayakugwema wena. Linda kuze kube yilapho wena usukwazi ukukhuluma ngokusebenzisa buthule, futhi ngokushesha uzobona imiphumela.
4. Ngizibeke izisekelo okunempilo ubuhlobo bakho
Just like a house okuqinile lusekelwe nezisekelo eziqinile, ubuhlobo okwanelisayo lusekelwe yilabo abaphile. Lokhu kusho ukuthi kufanele kube qotho umlingani wakho kanye, okubaluleke, ngokwakho kusukela ekuqaleni. Kungani ungaya emingaka ukuze ufihle amaphutha akho uma uhlela ikusasa ndawonye? Elinye uyogcina uphawule amaphuzu akho buthakathaka. Wake wacabanga ukuthi umlingani wakho empeleni kungenzeka ukuthi bathande side of kuwe ukuthi ucabangele okuyiphutha?
5. Ungadikibali amaphupho akho
Ngubani okutshelé ukuthi ukuze sibe nobuhlobo okwanelisayo futhi sijabule nawe siyiyeke amaphupho akho? Uma ucabanga lokhu Kuyisifiso umlingani wakho, kukhona ezimbili ongakhetha kukhona: noma wena wamthola / akulungile yakhe, noma akusiwona ONE. Neither ubugovu, noma wedwa bakha isimo sengqondo esifanele ebuhlotsheni. Ngokuphambene nalokho, a love ukubambisana enempilo kusho ukuthi support ezimbili bebaqinisane ukuba aphishekele amaphupho abo. Uma unquma ukuthi izifiso zakho siqu kanye nemigomo azibalulekile, wena maduze ukuzizwa ukhungathekile futhi zingafezeki. Ingabe lokhu lapho ufuna ubuhlobo bakho ukuba ababeya?